Taliye Cirfiid: Ciidanku Rayid ayay ku Dileen Bariire - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Taliye Cirfiid: Ciidanku Rayid ayay ku Dileen Bariire
August 26, 2017 admin503
Taliyaha Xoogga dalka Soomaaliya Axmed Jimcaale Cirfiid oo ay wareysatay idaacada VOA ayaa u sheegay in howlgal ay fuliyeen ciidamada Somalia iyo kuwa Maraykanku meel u dhow Bariire lagu dilay 10 qof oo rayid ah oo 3 ay caruur ahaayeen. General Cirfiid ayaa sheegay in shilkaasi uu ahaa mid ku dhacay si kama ah.
Taliye Cirfiid ayaa sheegay in shilkaasi uu dhacay kadib markii ciidamada huwanta ah iyo beeralay hubeysan oo ku sugnaa meel u dhow Bariire ay kala shakiyeen, kadibna ay rasaas bilaabtaya.
Taliyaha ayaa beeniyay war ka soo baxay saraakiil dowladda ka tirsan oo sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 8 ka tirsan al-Shabaab. “Waxaan xaqiijinayaa in dadka dhintay ay yihiin rayid, haatanna maydkoodii wuxuu yaalla cisbitaal Muqdisho ku yaalla” Sidaas waxaa yiri Taliye Cirfiid.
Taliska ciidanka Maraykanka ee Africa ayaa war qoraal ah ku sheegay inay la socdaan eedahaha sheegaya in rayid ku dhintay Bariire, isla markaana ay arrintaas baarayaan. Taliye Cirfiid ayaa sheegay inuu la kulmay madaxweynaha iyo Ra’isul-wasaaraha, oo uu sheegay inay ka xumaadeen dhimashada rayidka. Taliyaha ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in guddi xaqiiqo raadin ah loo saaray inay falkan soo baaraan.
Soomaaliya oo ka qeybgashay Shirka 5-aad ee heer Wasiir ee EU iyo Jaamacadda Carabta